Arbaco, Jan 13, 2021-Dowladda Federaalka oo u digtay dadka cadaallada u doonta Maxkamadaha Al-shabaab – LaacibOnline
Arbaco, Jan 13, 2021-Dowladda Federaalka oo u digtay dadka cadaallada u doonta Maxkamadaha Al-shabaab
” In Cadaallad Shabaab Loo raadsado waa dambi qof alaale qofkii cadaalad ka raadsadana waa dambiile in sharciga la horkeeno ay tahay ” ayuu yiri Wasiirka.
Wuxuu sheegay in Dowladda ku dadaashay dhismaha hay’addaha Garsoorka dalka dib u habeyn weyn lagu sameeyay, sidaa daraadeed loogana baahan yahay dadka in ay ku kalsoonaadaan hay’adahooda cadaallada.
”Cadaallada Al-shabaab waan aragnay waa tanay maalin kasta dadka lagu leynayo, Qaraxyada loo adeegsanayo, oo Wiilasha iyo Gabdhaha Soomaaliyeed oo ay dileen aan la tacaamuleyno Waalidiintooda. marka waxey mudan yihiin in lala dagaalamo” ayuu yiri Wasiirka Cadaallada Soomaaliya.
Dad badan oo ku nool deegaanada ay gacanta ku heyso ayaa maalin kasta ku xukuntama Maxkamada ay maamulaan Al-shabaab, iyaga oo u muuqda kuwo aan wax kalsooni ah ku qabin hay’addaha Garsoorka Dowladda.
← Arbaco, Jan 13, 2021-Safiirkii hore Maraykanka ee Soomaaliya oo madaxweyne Joe Biden ugu baaqay in ciidamada Maraykanka aan laga saarin Soomaaliya
Arbaco, Jan 13, 2021-Galmudug oo ka hadashay weerar dad lagu laayay oo ka dhacay gobolka Galgaduud →
Talaado, Jan 6 , 2021-War-murtiyeed laga soo saaray shirweynihii beesha Hawiye ee Muqdisho ku soo dhamaaday
Isniin, July 20, 2020-Maraykanka iyo lix waddan oo Carab ah oo cunoqabatayn kusoo rogay shaqsiyaad iyo shirkaddo loo haysto maalgalinta ISIS
Khamiis, Nov 12, 2020-Puntland oo shaqadii ka joojisay wasiir iyo agaasime guud oo isku gacan qaaday